Sawirro caruurta Syria ku muujinayaan mustaqbalkooda - BBC Somali
Sawirro caruurta Syria ku muujinayaan mustaqbalkooda
8 Febraayo 2016
Inkastoo xaalad qaxootinimo ay ku jiraan caruurta qaxootiga ah ee ka cararay dalka Suuriya, hadana lama oga waxa mustaqbalkooda dhabta uu yahay. Guddiga Badbaadada caalamiga ah ee IRC ayaa u diray Meredith Hutchison si ay sawirro uga soo qaaddo.
Gabdho ku nool xerada qaxootiga Zaatari ama xerada Mafraq ee waqooyiga Urdun, ayaa la waydiiyay in ay ka doodaan hadafkooda, oo ay qiyaasaan noloshooda mustaqbalka mid shaqsi iyo mid shaqo. Gabar kasta waxay isku ekaysiiyay riyadeeda mustaqbalka waxa ay jeceshahay in ay noqoto.
Haja,12 jir. Waxay jeceshahay in ay noqoto cirbixiyeen.
Fatima, oo 11 jir ah, mustaqbal ah dhaqtar qaliin.
Muntaha, 12 jir; mustaqbalka sawirqaade.
Malack, 16 jir, mustaqbalka sarkaal booliis.
Fatima, 16 jir, mustaqbal ah naqshadeyso.
Wissam, 15 jir, Mustaqbal ka shaqaynta farmashiyaha
Rama 13 jir jecel in ay mustaqbalka noqoto dhaqtar.
Nour, 18 jir, doonaysa mustaqbal qareennimo.
Sarah, 15 jir, naqshadaynta dharta mustaqbalka in ay noqoto ayay doonaysaa.
Nesrine, 11 jir doonaysa in ay noqoto sarkaal booliis ah.
Merwa, 13 jir muqtaqbalka doonaysa in ay noqoto sawir samaynta rinjiga la adeegsado
Amani, oo ah 10 jir, doonaysa mustaqbalka in ay noqoto duuliye diyaaradeed.
Bassima, waa 17 jir, waxay jeceshahay in ay noqoto mustaqbalka cunto kariso
Fatima waa 12 jir, waxay jeceshahay in ay noqoto mustaqbalka macalin.
Hiba oo sagaal jir ah, waxay jeceshahay in ay noqoto dhaqtarka caruurka